Ezinụlọ Ezinyere Victoria - Nchekwa ọdịda Mmekọahụ Ed | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ezinụlọ Ezinyere Victoria - Nchedo Ọdịmma Mmekọahụ Ed
Family Planning Victoria - Ebe Ọdịmma inghụ Mmekọahụ.
Mmekọ nwoke na nwanyị maka Mmekọahụ maka afọ 3 - 10 nke Family planning Victoria.
A gaghị edecha akwụkwọ ndị a n'akụkụ ọ bụla. Enyere ha ebe a ka ha nwee ike ihu ha iji gosipụta ụmụ anyị ọmụmụ ụlọ akwụkwọ. Nọmba ndị dị n’aha faịlụ ahụ na-ekpebi afọ ole akwụkwọ ntuziaka a na-emetụta. Ọ bụ ezie na e nwere akụkụ nke usoro mmụta a ga-enye otuto, ha na-akụzikwa ụmụ anyị okwu banyere okike na mmekọahụ nke anyị dị ka ndị nne na nna jụrụ.
A na-eji okwu ahụ maka nwoke na nwanyị eme ihe maka ọdịiche ndị e mepụtara n'ihi atụmanya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ihe dị mma, nke ziri ezi, ma ọ bụ ihe mara mma maka nwa nwoke ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị. Nke a dị iche n'okwu a na-eji nwoke ma ọ bụ nwanyị eme ihe iji gosipụta ọdịiche dị n'etiti nwoke na nwanyị.
Ọzọkwa, na FIO na nso nso a, ngalaba ahụ na-adụ ọdụ na ndị nkuzi nwere ike ịhọrọ ma họrọ ihe ndị ọzọ dịka ha si chọọ, na-eji amamịghe ọkachamara ha. Anyị ga-arụ ụka na n'ihe metụtara mmekọahụ na mmekọrịta, ọ bụ ihe na-adịghị anakwere ka onye ọ bụla họrọ ihe ha hụrụ dị ka ihe kwesịrị ekwesị. Ma obu gosi umu akwukwo ihe ndi a n’ebughi uzo gosiputa ndi nne na nna iji kwado ha. Mepee faịlụ ma choo "okike" na "transgender".
Ihe ọmụmụ a na-ewetara ụmụaka aka nghọta.
Ọmụmaatụ. Ndi umuaka, ndi umuaka a ka egosiputara ha site na ovu ovu di n’akuku.
Obere ihe a nwere akụkụ akwara ndị ọzọ karịa n'akụkụ akụkụ ahụ ọ bụla ọzọ. Mgbe nwoke na nwanyị na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ nwee ọ rusụ, ọbara na-erute ya, ha na-enwetakwa mmetụta dị ụtọ, na-enwe mmekọahụ. Gịnị bụ ihe kwekọrọ na ụmụ nwoke?
Otu ihe atụ nke mmega ahụ nke ụmụ akwụkwọ na-egosi masturbation nwanyị na klas agwakọta maka ọkwa afọ 5 & 6:
Paul ke ubet esie, okot magazine eyeneka esie an̄wan. Ọ nọ n’etiti akwụkwọ ozi peeji ndị na-eto eto na-ede, ya na ajụjụ ha nwere, ka dọkịta zaa. Otu akwụkwọ ozi bụ ihe banyere nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma chọtara etu esi eme onwe ya ara. O nwere mmasị na akwụkwọ ozi ahụ n'ihi na ya na ndị enyi ya na-ekwu maka otu isiokwu n'oge nri ehihie. Naanị mgbe ahụ, nne ya na-abanye na-akụghị aka. N'ịbụ onye akpata oyi, Paul tụpụrụ magazin ahụ. Mama ya na-ahụ peeji ọ na-agụ. Kedu ihe ọ na-eme? Olee otú ọ ga-adị ya?
Enwere ike ịnweta onye ntụgharị pdf dị n'ịntanetị maka akwụkwọ ntuziaka ebe a: - https://www.onlinedoctranslator.com/
Akwụkwọ ntuziaka nwoke na nwanyị.
Ọdịmma ala - Nchịkọta Afọ Mmụta nke 3 & 4.
Ọdịmma ala - Nchịkọta Afọ Mmụta nke 5 & 6.
Ọdịmma ala - Nchịkọta Afọ Mmụta nke 7 & 8.
Ọdịmma ala - Nchịkọta Afọ Mmụta nke 9 & 10.
Egosiputara umu akwukwo.
Mgbochi igbochi - Nkuzi ntuziaka.
Mgbochi igbochi - Studentsmụ akwụkwọ Manual.